Kôsta Rika: Nosalorana ny lokan’ny kolontsaina nasionaly ho an’ny asa fanaovan-gazety ilay bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 14:42 GMT
Nahitana dingana lehibe tany Kôsta Rika ny fampitam-baovao amn'ny endriny hafa. Natolotra an'i Cristian Cambronero ny Loka Nasionaly Pío Viquez ho an'ny Asa Fanaovan-gazety tamin'ny taona 2010 noho ny zava-bitany tamin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny endrika hafa. Namoaka lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy Fusil de Chispas nanomboka tamin'ny taona 2005 i Cristian, nandrisika ny fandraisana anjaran'ireo mpamaky tamin'ny lohahevitra avy amin'ny politika sy ny media sosialy, mankany amin'ny kolontsaina sy ny mozika ankoatra ireo hafa. Nandray anjara mavitrika sy nampiroborobo ny hetsika toy ny Fihaonana Iraisam-pirenena Voalohany ho an'ny Asa Fanaovan-gazetin'Olon-tsotra sy ny hetsika nitovy tamin'izany ihany koa izy, ary ny fampivoarana ny teknolojia miaraka amin'ny fampitam-baovao amin'ny fomba nentim-paharazana no tanjon'izany voalohany.
Nankalazain'ny Minisiteran'ny Kolontsaina hatramin'ny taona 1961 ny Lokan'ny Kolontsaina Nasionaly. Mankato ny ezaka sy ny zava-bita izay ataon'ny olona, ​​ny vondrona ary ny fikambanana amin'ny Kolontsaina, Siansa, Kolontsaina Malaza ary ny Asa Fanaovan-gazety izy ireo. Io no fotoana voalohany nandraisana ny fampitam-baovao nomerika ho anisan'ny notendrena loka.
Niparitaka haingana tamin'ny tambajotra sosialy sy twitter ny vaovao tsara. Nahazo aingam-panahy tamin'ny fanambarana ny mpiara-miasa aminy nahazo voninahitra lehibe toy izany ny bilaogera sasany. Nanamarika tao amin'ny bilaoginy Por Escrito i Alberto González hoe:
Nanoratra tao amin'ny Habla Costa Rica i Luis Diego Molina :
Naneho ny fihetseham-pony tamin'ny fanambarana i Julia Ardón :
Nametraka taratasy fankasitrahana tao amin'ny bilaoginy Fusil de Chispas i Cristian :